Yeyiphi imibuzo onokuthi uyifumane kwiMathematics Information Subtest ye-ASVAB?
Kwi-CAT-ASVAB, ulwazi olungezantsi lweMathematics lunemibuzo eli-16 egubungela lonke uluhlu lwezibalo zesikolo esiphakamileyo, kwaye unemizuzu engama-20 yokugqibezela lo mboniso. (Ukuba uthatha uguqulelo lwephepha le-ASVAB, kuya kufuneka uphendule imibuzo engama-25 kwimizuzu engama-24.) Akunyanzelekanga ukuba ukhawuleze ukubala nganye, kodwa usete isantya esihle (malunga nomzuzu ngombuzo ngamnye).
Kuya kufuneka ujolise kwaye ugxile ekusombululeni ingxaki nganye ngokukhawuleza nangokuchanekileyo.
Abantu abathandekayo abenza imigaqo bayalele ukuba awukwazi ukusebenzisa ikhalityhuleyitha kuyo nayiphi na imibuzo yezibalo kwi-ASVAB. Xa ungena kwigumbi lokuvavanya, ufumana ipensile kunye nephepha lokuqala. Iindaba ezimnandi zezokuba yonke imibuzo ekwiingxelo ze-ASVAB ziyilelwe ukuba uzisombulule ngaphandle kokubala nge-elektroniki.
Isicatshulwa soLwazi lweMathematics sineempawu ezintathu:
Izibalo ngqo: Olu hlobo lombuzo lukubonisa ngolinganiso lwemathematika kwaye lukucele ukuba usombulule.
Umthetho wemathematika: Olu hlobo lombuzo lukucela malunga nomthetho wemathematics, umthetho, igama, okanye umxholo.
Idityanisiwe: Olu hlobo lombuzo lukucela ukuba usebenzise umthetho wemathematics, umthetho, igama, okanye umxholo ukusombulula ingxaki.
Imibuzo yezibalo ngqo
Umbuzo othe ngqo wezibalo lolona hlobo luqhelekileyo lombuzo kwiMathematics Knowledge subtest. Kumbuzo wezibalo othe ngqo, unikwa i-equation kwaye ubuziwe ukuyisombulula. Ubona ezininzi zezi.
Sombulula x : Mbini x + 4 (2 x + 7) = 3 (2 x + 4).
I-ondansetron yinto elawulwayo
Impendulo echanekileyo ithi Khetha (B), –4. Olu lubalo lwealgebra onokuthi ulusombulule usebenzisa imigaqo yealgebra:
Imibuzo yemithetho yeMathematika
Ngamanye amaxesha ubuqhetseba boLwazi lweMathematics bukubuza umbuzo ongabandakanyi ukusombulula ingxaki yezibalo. Endaweni yoko, kulindeleke ukuba uphendule umbuzo malunga nomxholo wemathematics, ixesha lezibalo, umthetho, okanye umthetho. Akunakulindeleka ukuba ubone ngaphezulu kwezibini okanye ezintathu kwezi ntlobo zemibuzo kuvavanyo, nangona kunjalo.
Kwingxelo 432 xy + 124 xy , i-432 ibizwa ngokuba yi
Impendulo echanekileyo yoKhetho (B), eyoneleyo. A ulungelelwaniso linani liphindaphindwe amaxesha umahluko okanye imveliso yezinto eziguquguqukayo okanye amandla eziguquguqukayo kwikota.
Unokubona imibuzo esibhozo okanye esithoba edityanisiweyo kwi-subtype yoLwazi lweMathematics. Le mibuzo ifuna ukuba usebenzise igama elithile lezibalo, umthetho, okanye umxholo ukusombulula ingxaki yezibalo.
naproxen 500mg ngaphezulu kwekhawuntari
Yintoni i-quotient yesi-4 neye-4?
umthamo omkhulu we-aleve
Impendulo echanekileyo Choice (D), 1. Ukusombulula le ngxaki, kuya kufuneka uyazi ukuba a quotient sisiphumo sesahlulo. Xa uyifumene loo nto, kuya kufuneka wenze umsebenzi: 4 ÷ 4 = 1
Isikhokelo samachiza sepercocet davis
iziphumo ebezingalindelekanga ze-copaxone ixesha elide
I-bcr-abl tyrosine kinase